musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Peru Kuvhuna Nhau » 7.5 Kudengenyeka kwenyika muNorthern Peru
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Peru Kuvhuna Nhau • Kufamba Wire Nhau
Kudengenyeka kwepasi kuviri kwakarova Peru Svondo rino, asi sezvineiwo hakuna kukonzera kukuvara kupi nekupi kukuru kana kufa.
Kukuvadzwa kwakanyorwa munzvimbo iri kure yeAmazon kunonyanya kurongeka.
Mutungamiri wePeru akati hurumende yavo ichatsigira avo vakawirwa nekudengenyeka kwepasi kwe7.5-magnitude mangwanani eSvondo mangwanani, zvichisiya kukuvara kwemaitiro kuchamhembe kwenyika.
Zvakare, kudengenyeka kwepasi kwe5.2 magnitude kwakanyorwa muLima, Guta guru rePeru.
Iko hakuna kutyisidzira kwetsunami kuPacific Ocean.
Izvo hazviratidzike kudengenyeka kune imwe nzvimbo iri kure yeNorthern Peru. Hapana vanhu vakakuvara vakambotaurwa, asi zvivakwa nemigwagwa zvakakuvadzwa, sekuonekwa mumavhidhiyo akaiswa nePeru National Police Force.
Kudengenyeka kwacho kwakanzwika muEcuador uye kusvika kuLima.
Kudengenyeka kwenyika kwaNovember 28, 2021, M 7.5 kuchamhembe kwePeru kwakaitika semhedzisiro yekukanganisa kwakajairwa pakadzika kwepakati, anenge 110 km pasi pePasi pevhu mukati meiyo subducted lithosphere yeNazca plate. Focal mechanism solutions inoratidza kuti kuputika kwakaitika kuchamhembe-kuchamhembe kwakadziva kumadokero kana maodzanyemba-maodzanyemba kwakadziva kumadokero kunorova, kunyudza zvine mwero kukanganisa.
Panzvimbo yekudengenyeka kwenyika, ndiro yeNazca inofamba ichienda kumabvazuva kune South America ndiro pavelocity inenge 70 mm / yr, ichidzikisa paPeru-Chile Trench, kumadokero kwegungwa rePeruvia, uye November 28th. kudengenyeka kwenyika. Kudengenyeka kwepasi kwekuchamhembe kwePeru uye kwakawanda kumadokero kweSouth America kunokonzerwa nemhando dzinokonzerwa nekuderera uku kunoenderera; palatitude iyi, ndiro yeNazca iri kuita seismically kudzika kusvika 650 km. Kudengenyeka kwepasi uku kwakaitika muchikamu chendiro yakaderedzwa iyo yakagadzira kudengenyeka kwepasi kazhinji nekwakadzika kwe100 kusvika 150 km.
Kudengenyeka kwenyika kwakadai sechiitiko ichi, kukadzika kwakadzika pakati pe70 ne300 km, kunowanzonzi "kudzika-pakati-kudzika" kwekudengenyeka kwenyika. Kudengenyeka kwepakati-kwakadzika kwepasi kunomiririra deformation mukati meakaderedzwa slabs pane pane isina kudzika plate interface pakati pekudzikisa uye pamusoro petectonic plates. Zvinowanzokonzera kukuvadzwa kushoma pasi pamusoro penzvimbo yadzo pane kudengenyeka kwenyika kwakafanana-hukuru, asi kudengenyeka kwenyika kukuru kwepakati-kwakadzika kunogona kunzwika kure kure kubva kune epicenters.
Kudengenyeka kukuru kwepakati-kudzika kwakadzika kunowanzoitika muchikamu chino cheNazca slab, uye zvimwe zvishanu zvepakati-zvakadzama M 7+ zviitiko zvakaitika mukati me250 km yekudengenyeka kwenyika kwaNovember 28th mumakore zana apfuura. AM 7.5 kudengenyeka musi waSeptember 26th 2005, iri pakadzika kwakafanana asi inenge 140 km kumaodzanyemba kweNovember 28th, 2021 kudengenyeka kwenyika, yakakonzera kufa kwe5, kukuvara kwe70, uye kukanganisa kukuru munzvimbo yakapoteredza. Munguva pfupi yapfuura, kudengenyeka kweM8.0 muna Chivabvu 26, 2019, ingangoita 230 km kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwekudengenyeka kwenyika kwaNovember 28, 2021, kwakakonzera kufa kwevanhu vaviri.